कुमार लम्साल | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता कुमार लम्साल
सानिमा विकास बैङ्क लिमिटेड
”नयाँ साझेदारको आवश्यकता महसूस गरेका छैनौँ” –
विगत दुई दशकदेखि बैङ्किङ क्षेत्रमा कार्यरत कुमार लम्सालले तत्कालीन ग्रिण्डलेज (हालको स्टयार्ण्र्डड चार्टर्ड बैङ्क) तथा बैङ्क अफ काठमाण्डूमा समेत काम गरिसकेका छन् । सानिमा विकास बैङ्कको स्थापनाकाल सन् २००४ देखि नै संलग्न लम्साल हाल उक्त बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । यो बैङ्क अब छिट्टै वाणिज्य बैङ्कमा स्तरोन्नति गर्दै छ । लम्सालसँग सानिमाको स्तरोन्नति तथा नेपालको समग्र बैङ्किङ क्षेत्रका बारेमा अभियान दैनिकले गरेको कुराकानीको सारः
सानिमाको लगानी, निक्षेप र कर्जा असुलीको स्थिति कस्तो छ ?
पूँजी परिचालनको गुणस्तरको दृष्टिले नेपालका उत्कृष्ट बैङ्कमध्ये सानिमा एक नम्बरमै पर्छ । यो हामीले भनेको होइन । स्वतन्त्र एजेन्सीहरूको अध्ययनले सार्वजनिक गरेको तथ्य हो । हाल सानिमाका निक्षेपकर्ता ३० हजार नाघिसकेका छन् । खराब कर्जा शून्य दशमलव ०७ प्रतिशतमात्र छ । यो अन्यन्तै न्यून हो । उपलब्ध भएसम्मका आधुनिक प्रविधिमार्फत सानिमाले ग्राहकहरूलाई सेवा दिइरहेको छ । समग्रमा बैङ्कको लगानी, निक्षेप र असूली अवस्था अत्यन्त सन्तोषजनक छ ।
बैङ्क खुल्ने क्रम बढेरै गएको छ, सामूहिक लगानीको सम्भावना कत्तिको छ ?
सामूहिक लगानीको बजार पक्कै पनि राम्रो छ । सबै व्यक्तिले एक्लै जोखिम उठाएर, आफैँले मात्र लगानी गर्छन् भन्ने नहुन पनि सक्छ । सुरक्षित लगानी तथा असूलीका लागि पनि सामूहिक कोष निर्माण गरेर काम गरौं भन्ने मानिसहरूको जमात पनि विस्तारै बढ्दै गएको देखिँदै छ ।
बैङ्किङ क्षेत्रका चुनौती र समस्यालाई कसरी लिनुभएको छ ?
राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको समग्र क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ । जसका कारण केही अप्ठेरो स्थिति सृजना भएको छ । अहिले केही समस्या छन्, बिग्रिहालेको, भत्किइसकेको भन्ने चाहिँ पक्कै छैन ।बैङ्कहरू आफैंले आन्तरिक अवस्थाको सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैङ्कहरूले कस्तो किसिमको जोखिम लिने, कस्तो किसिमको नलिने भन्ने कुरामा विचार गर्नैपर्ने अवस्था छ । यही चुनौती सबै बैङ्कमाझ छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । बैङ्कको नाफा एकातिर छ, जोखिम अर्को तिर । बढी जोखिम लियो भने बढी नाफा हुन सक्छ । तर, त्यो जोखिम ह्वात्तै बढेको खण्डमा तुरुन्तै नोक्सानमा पनि जान सक्छ । त्यसको अन्तिम सीमा कुन हो भन्ने राम्ररी बुझेर मात्र काम गर्ने चुनौती नेपालका सबै बैङ्कलाई छ । अघिल्लो वर्षकै घटना सम्झने हो भने पनि बैङ्कहरू सचेत नभएको स्पष्ट हुन्छ । घरजग्गा कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाहबाट उत्पन्न सङ्कटबाट अब चाहिँ केही पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अनुत्पादक मानिएको घरजग्गामा अनियन्त्रित रूपमा लगानी जानु हुँदैनथ्यो । बैङ्कहरू तीव्र गतिमा खुलिरहेका छन् । त्यसबाट उत्पन्न प्रतिस्पर्धाका कारण पनि विभिन्न समस्या आउन सक्छन् ।
अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले समेत स्थान पाउने सम्भावना हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेबित्तिकै गुणस्तरमा सम्झौता हुन थाल्छ । त्यसबखत एउटा राम्रो सम्भावना बोकेको (ऋण) योजनालाई अर्कैले उपयोग गरिदिन्छ भन्ने डरले अलि कम र खुकुलो शर्तमा स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढेर जान्छ । त्यस्तो ऋण प्रवाहले बैङ्कको जोखिम कैयौं गुणा बढाइदिन्छ । प्रतिस्पर्धाको यस प्रवृत्तिलाई कसरी सन्तुलित ढङ्गबाट अगाडि बढाउने भन्ने समस्या बैङ्कहरूमा सधैं कायम छ । प्रतिस्पर्धाबाटै उत्पन्न हुने अर्को समस्या भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि हो । बैङ्क खुल्ने लहरसँगै अहिले दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ ।
सानिमाको लगानी क्षेत्र र प्राथमिकता चाहिँ के हो ?
कुनै एउटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसैमा मात्र लगानी गर्दा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । त्यो क्षेत्र बिग्रियो भने ठूलो समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले हरेक क्षेत्रमा बाँडेरै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति छ । पर्यटन, मेटल इण्डष्ट्रिज, सीमेण्ट, कलेज, अस्पताल, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने हाम्रो योजना छ । यद्यपि, हामीसगँ भएको विशेष ज्ञानका कारण जलविद्युत्मा अलि बढी झुकाव र चासो छ, त्यसैमा बढी काम गर्न खोजिरहेका छौँ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा सानिमाको लगानी विशेषज्ञताका आधारमा मात्रै हो ?
होइन, अहिले नेपालमा लगानीको अवसर कुनकुन क्षेत्रमा छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपालमा दीर्घकालीन लगानीका निम्ति राम्रो र सुरक्षित क्षेत्र भनेको जलविद्युत् पनि हो । यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सम्भावना र अवसर पनि धेरै छन् । प्रतिस्पर्धामा चल्नुपरेपछि अवसरमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै । जलविद्युत् प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो । त्यसैमा हाम्रो विशेषज्ञता र ज्ञान पनि भएको अवस्थामा हामी किन अगाडि नबढ्ने भन्ने हाम्रो सोच हो । र, त्यही सोचअनुरूप हाम्रो लगानी पनि भएको छ ।
जलस्रोतमा सानिमाको लगानी कति छ ?
तुलनात्मक रूपमा सानिमा सानो बैङ्क हो । जलविद्युत् आयोजनाका लागि ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्छ । यद्यपि, अहिलेसम्म हामीले जलविद्युत्का पाँचवटा आयोजना सञ्चालन गरिसकेका छौँ । दोलखामा सवा अर्ब रुपैयाँको लागतमा १० मेगावाटको सिप्रिङ खोला जलविद्युत् आयोजना र सिन्धुपाल्चोकमा रू. ४५ करोडको लागतमा ३ मेगावाटको भैरवकुण्ड जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सिन्धुपाल्चोकमा १ मेगावाटको हाँडीखोला आयोजना, फिदिममा १ मेगावाटकै फेमे खोला आयोजना, ५ सय किलोवाटको रैराङ आयोजना र ३ सय किलोवाटको शालीनदी आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । सिप्रिङ खोला, भैरवकुण्ड, हाँडीखोला र फेमे खोला आयोजनामा सानिमाको नेतृत्वमा अन्य वाणिज्य बैङ्कहरूको पनि लगानी छ । रैराङ र शालीनदीमा भने सानिमा एक्लैको लगानी हो । सङ्ख्याको दृष्टिले हेर्ने हो भने कुनै पनि बैङ्कसँग यति धेरै सङ्ख्यामा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी सम्भवतः भएको छैन । नबिल बैङ्क, बैङ्क अफ काठमाण्डू, इन्भेष्टमेण्ट, एनएमबी, बैङ्क अफ एशियालगायतका वाणिज्य बैङ्कले हाम्रो नेतृत्वमा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका छन् । एउटा विकास बैङ्कको हैसियतले यति धेरै आयोजनामा यतिका वाणिज्य बैङ्कहरूलाई साझेदार बनाएर अघि बढ्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । वाणिज्य बैङ्कहरूले हामीप्रति दर्शाएको अपार विश्वासको परिणामले नै यो सम्भव भएको हो ।
बैङ्कका नयाँ योजनाहरू केके छन् ?
सानै भए पनि जलविद्युत्का चारवटा आयोजना पूरा भइसकेका छन् । दुईवटा बनिरहेका छन् । जलविद्युत् आयोजनामा सम्भव भएसम्म लगानी साझेदारी (इक्विटी) मा अघि बढ्ने सोच बनाएका छौं । जलविद्युत्जस्तो ठूलो लगानीका साथै सानो लगानीतर्फपनि केही ध्यान दिने हो कि भन्ने छलफल चलिरहेको छ ।
स्तरोन्नति गर्न थप पूँजीका निम्ति नयाँ साझेदारको खोजी पनि छ कि ?
छैन, अहिल्यै हामीले नयाँ साझेदारको आवश्यकता महसूस गरेका छैनौं । अहिले सानिमाको चुक्ता पूँजी रू. ८० करोड छ । रू. १ अर्ब २० करोडको हकप्रद शेयर निकालेका छौँ । सानिमा गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) त्यसमा पनि खास गरी रूसमा रहेका नेपालीद्वारा प्रवर्द्धित बैङ्क भएकाले अन्य देशमा रहेका एनआरएनलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ भन्ने सोचले गत वर्ष हामीले झण्डै ३ करोडको शेयर वितरण गरेका हौँ । जापान, बेलायत, अमेरिकालगायतका देशमा बसोवास गरिरहेका केही नेपालीहरूलाई सानिमामा संलग्न गराएका छौँ । पूँजी नै सङ्कलन गर्न भनेर नयाँ साझेदार संलग्न गराएका होइनौँ ।
वित्तीय सहकारीका कारण बैङ्कमा निक्षेप कम हुन थाल्यो भन्ने गुनासो छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
स्वतन्त्र बजार छ । वित्तीय सहकारीहरूले आफ्नो सेवा दिएर ग्राहकलाई खुशी पारी निक्षेप लिन्छन् भने बैङ्कले आपत्ति मान्नुहुन्न । बैङ्कहरूले पनि आफ्नो सेवा र सुविधामार्फ त्यो निक्षेप लिन सक्नुपर्छ । तर, सहकारीहरू कसरी चलिरहेका छन् ? नियामक निकायले कसरी हेरिरहेको छ ? त्यो भने महत्वपूर्ण कुरा हो । सहकारी संस्था पनि र्सवसाधारणको पैसा जम्मा हुने निकाय हो । जसरी बैङ्कहरूलाई केन्द्रीय बैङ्क तथा सम्बद्ध अन्य निकायबाट नियमित नियमन गरिन्छ, त्यसैगरी सहकारीको पनि नियमन हुनुपर्छ ।
सानिमाका सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यक्रम चाहिँ कस्ता छन् ?
हामीले गत वर्ष कोशीपीडितलाई सहयोग गरेका थियौं । विभिन्न समयमा स्वास्थ्यशिविरहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौं । रक्तदान कार्यक्रम, वृद्धहरूलाई सहयोग र सम्मानको कार्यक्रम नियमित सञ्चालन भइरहेको छ । डिसेम्बर ६ मा हाम्रो वाषिर्कोत्सव पर्दछ । त्यस अवसरमा पनि हामी केही थप सामाजिक कार्य गर्नेछौं । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने सिलसिलामा हामी कहिल्यै पछाडि पर्ने छैनौं ।
बैङ्कको आफ्नो भौतिक संरचनाको अवस्था कस्तो छ ?
काठमाडौंको नारायणचौरमा ४० आना जमीनमा सानिमाको नयाँ भवन बनिरहेको छ । जमीनमा रू. १६ करोड र भवनमा पनि रू. १६ करोडकै लगानीमा ६ तले नयाँ भवन बन्दै छ । प्राविधिक तथा भौतिक संरचनालाई अद्यावधिक गर्दै जानेछौं ।
हाल सानिमा मुख्य रूपमा केमा केन्द्रित छ ?
हाम्रो अहिलेको ध्यान स्तरोन्नति गरेर वाणिज्य बैङ्क बनाउनेमै केन्द्रित छ । त्यसैका लागि हामी राष्ट्र बैङ्कको निर्णयको प्रतीक्षामा छौं । केन्द्रीय बैङ्कले चाँडै नै सकारात्मक जवाफ दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । स्वीकृतिपछि हामी सर्वप्रथम जलविद्युत्का क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्नेछौं । देशका गरीब जनताले पनि ऋण पाउनबाट वञ्चित हुनु नपरोस्, तिनको जीवनस्तरमा सुधार होस् भन्ने चाहनाले हामी ‘माइक्रोफाइनान्स’ तर्फप्रेरित भएका छौं । सानिमाका प्रवर्द्धकहरूको भित्री इच्छा पनि यही छ ।
हामीले जम्मा रू. १६ करोडबाट बैङ्क शुरू गरेका हौं । पूँजी बढाउनेदेखि अनेकौं सानातिना काममा हामी अलमलिनुपर्यो । तर, त्यसले पनि हामीलाई फाइदै पुर्यायो । अब हामी एउटा बलियो, सक्षम, कुशल व्यवस्थापनमा चलेको बैङ्कका रूपमा स्थापित भइसक्यौं । अबको फड्को भनेको चौतर्फी फैलिने नै हो । अब हामी गाउँगाउँमा पुग्नेछौं । चार/पाँच वर्षभित्र सानिमा एउटा राम्रो, भरपर्दो र उच्चस्तरीय बैङ्कका रूपमा नेपाली जनताले देख्न पाउनेछन् । हामी वाणिज्य बैङ्कका रूपमा आएपछि लगानी विविधता गर्नेछौं । अहिले नै पनि हामीले पर्यटनमा लगानी शुरू गरेका छौं । गोकर्ण रिसोर्ट खरीदका निम्ति भर्खरै हामीले एउटा सहायक लगानीकर्ताका रूपमा सम्झौता गरेका छौं । पोखरामा ‘हेरिटेज होटेल’ का नामबाट नयाँ होटेल निर्माण गर्दै छौं । नोबेल मेडिकल कलेजमा पनि हाम्रो लगानी छ । देख्दा हामी विकास बैङ्कका रूपमा छौं, तर काम गराइ चाहिँ वाणिज्य बैङ्कभन्दा कम छैन ।